စာအုပ်များယူရန် ( ၂ )
မျက်စိမှိတ်ပြသောကောင်မလေး..... အရင်ဆုံးတော့ photoshop မှမိမိလိုချင်တဲ့ ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် ပြီးတော့ Ctrl + J ကိုနှိပ်ပြီးတော့ lay...
မီး စာလုံးလေး ရေးကြရအောင်
မီးစာလုံးလေး ဖန်တီးကြစို့ ...........့  Photoshop File ကိုဖွင့်ပြီး File new ပါ။ Tools box ထဲမှ Type (T) ကိုကလစ်နိုပ်ပြီး ...
Photoshop File Formats များခွဲခြားပုံ
Photoshop File Formats များခွဲခြားပုံ Photoshop ဟာ file format များစွာကို support ပေးထားပါတယ်။ အခုပြောမှာက အသုံးများတဲ့ format ...
အလင်းမှောင်ကိုအသုံးပြု၍ ထုများဖန်တီးခြင်း Tint and Shade အရာဝတ္ထုများဟာ အလင်းကြောင့်သာ ထုသဘောကို မြင်ရတာပါ၊ နောက်တစ်ခုက အလင်းရဲ့ဆ...
Photoshop cs4 ဖြင့် မူရင်းဓါတ်ပုံအရောင်အသွေးအတိုင်းအနောက်ခံကာလာပြောင်းနည်း (1) Photoshop cs-4 ကိုဖွင့်ပြီး File Open ထဲမှ မိမိ...
မြိတ်မြို့အတွက် ကျနော်တို့ နည်းပညာ ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ နေရာလေးပါ... ဒီနေရာလေး ကို လာလည်ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်...
Adobe Photoshop ၊ CorelDRAW ၊ Adobe Premiere စသည်ဆွဲသားနည်းတို့ကို အသုံးပြု၍ ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံ ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုများ၊ အထူးပြုလုပ်ချက်များကို ...
Photoshop-Cs4ဖြင့်လှပသောရောင်စုံ ဆံကေသာများပြောင်းလဲခြင်း Photoshop Cs-4 File ကိုဖွင့်ပြီး File Open ကိုဖွင့်ပါ၊ မိမိကျွန်ပ...
Photoshop တွင်အရောင်များဘယ်လိုသုံးမလဲ Photoshop တွင်အရောင်များကိုနည်းစနစ်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အများဆုံးသုံးသောစနစ်များမှာ ...
အရင်ဆုံးတော့ photoshop မှမိမိလိုချင်တဲ့ ပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်
Posted by kohtaikpannhla@gmail.com at 2:08 AM 1 comment: Links to this post
အရာဝတ္ထုများဟာ အလင်းကြောင့်သာ ထုသဘောကို မြင်ရတာပါ၊ နောက်တစ်ခုက အလင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မှာ အမှောင် သဘာဝ ရှိနေပါတယ်။ ဒီအလင်းနဲ့အမှောင်ရှိမှသာ အရာဝထ္ထုတွေကို ထုသဘောရအောင် ဖန်တီးနိုင်မှာပါ။ Photoshop မှာ လည်း ဒီသဘောသဘာဝကို အသုံးပြုပါတယ်။ အရာဝထ္ထုတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အရောင် (local color) များ ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ - ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးရဲ့ local color ပြောပါဆိုရင် အ၀ါရောင်ပါ။ အဲ့ဒီအရောင်များပေါ်ကိုအလင်းထိရောက်တဲ့အခါ အရောင်က ဖွေးဖြူလာပါတယ်၊ အလင်းမသက်ရောက်နိုင်တဲ့အမှောင်ဘက်မှာတော့ အမဲရောင်သန်းလာပါတယ်။ ဒီအချင်းအရာကို Tint and shade ကိုအသုံးပြုပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အရောင်တစ်ခုကို အဖြူရောင်နဲ့ရောစပ်လိုက်ရင် Tint လို့ခေါ်ပြီး အမဲရောင်နဲ့ ရောစပ်လိုက်ရင်တော့ shade effect ကိုရရှိမှာပါ၊ လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ရအောင်။
Photoshop မှာ သင့်တော်မယ်အရွယ်နဲ့ new document တစ်ခုခေါ်ပါ၊ ပြီးရင် ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း guide line ရှစ်ခုကိုဆွဲပါ။ Ruler bar (if necessary press Ctrl + r) မှာ click and drag လုပ်ပြီး လိုချင်တဲ့နေရာမှာ drop လုပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် အတိ အကျလိုချင်ရင်တော့ New Guide မှာ amount ရိုက်ထည့်ပေးပါ (View, New Guide)။ ပြီးရင် အပြင်ဘောင်လိုင်းလေးအတိုင်း Rectangular Marquee သုံးပြီး selection လုပ်ပါ။ အရောင်တစ်ခုခုကို fill လုပ်ပါ။ ဒါဆိုရင်ဒီပုံအတိုင်းမြင်နေရပါပြီ။
Posted by kohtaikpannhla@gmail.com at 6:10 AM No comments: Links to this post
Photoshop ဟာ file format များစွာကို support ပေးထားပါတယ်။ အခုပြောမှာက အသုံးများတဲ့ format တချို့ပါ။
ဒီအမျိုးအစားဟာ Photoshop ရဲ့ default format ပါ။ file ကို ပြုပြင်စရာတွေရှိသေးတယ် (ဥပမာ text တွေ layer အရွေ့ အပြောင်းတွေ) ဆိုရင် ဒီ format နဲ့ save ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှ ပြန် edit လုပ်ရတာလွယ်မှာပါ။ အရင် Photoshop 7.0 မှာ file size ဟာ 30,000 pixel by 30,000 pixel ထိ ရပါတယ်။ အခု Photoshop အသစ်တွေဖြစ်တဲ့ CS or CS2 မှာတော့ file size ဟာ 300,000 x 300,000 pixels ထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါပြီ။ file type ကတော့ (*.PSD) ပါ။
Joint Photographic Experts Group ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ file compression algorithm ကို ခေါ်ထားတာပါ။ file format မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် file format အမှန်က JFIF (JPEG File Interchange Format) ပါ။ ဒါပေမယ့် JPEG ဆိုတဲ့ အမည်ပဲ တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ အရောင်စနစ်အနေနဲ့ RGB, CMYK, Grayscale တွေသုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူက transparency ကိုတော့ support မလုပ်ပါဘူး။ File တစ်ခုကို JPEG format နဲ့ပြောင်းချင်ရင် အဲဒီ file ကိုဖွင့်ပြီး Save As လုပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ file type မှာတော့ JPG ပေးလိုက်ပေါ့။
JPEG Option dialog box မှာ file ကို ဘယ်လို quality လိုချင်တယ်ဆိုတာလဲ စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။0က quality အနိမ့်ဆုံးနဲ့ file size အသေးဆုံးပါပဲ။ 12 ကတော့ quality အကောင်းဆုံးနဲ့ file size အကြီးဆုံးပါပဲ။ File တစ်ခုကို size လျှော့ချင်တဲ့အခါမှာ ဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် JPEG file တစ်ခုကို JPEG file အဖြစ် ထပ် save as လုပ်တာဟာ quality ကို ထပ်ကျစေပါတယ်။
ဒါက JPEG ရဲ့နည်းပညာနောက်ဆက်တွဲတစ်ခုပါ။ သူ့ကို Acrobat Reader မှာလဲ ဖွင့်ကြည့်လို့ရလာပါတယ်။ Acrobat file တွေဟာ cross-platform format ပါ။ operation system အများစုနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
GIF (Graphics Interchange Format) ဟာ web page တွေအတွက် အသုံးများပါတယ်။ transparency support လုပ်ပါ တယ်။ အရောင်ကတော့ RBG, Index mode တွေပါ ၂၅၆ ရောင်ထိလဲ ကန့်သတ်ထားပါသေးတယ်။ Animation ပုံလေးတွေ လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Animated GIF ကိုတော့ Image Ready နဲ့ ပြုလုပ်ရတာပါ။
Tagged Image File Format (TIFF) ဟာဆိုရင် digital printing services အများစုက လက်ခံနိုင်တဲ့ format ပါ။ scanner နဲ့ digital camera များမှာလဲသုံးပါတယ်။ အရောင်အနေနဲ့တော့ CMYK, RGB, Lab, Indexed color, Grayscale နဲ့ Bitmap တွေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Adobe ရဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Post script က ဆင်းသက်လာတာပါ။ Encapsulated Postscript (EPS) ပါ။ text, graphics တွေရောပြီး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by kohtaikpannhla@gmail.com at 1:01 AM No comments: Links to this post
သင့်Email ကိုထားခဲ့ပါ mail အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါမည်
(၁၅)ကြိမ်မြောက် အ.ထ.က(၂)မြိတ်မြို့ မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲဖိတ်ကြားလွှာ
http://www.kohtaikpannhla.blogspot.com. Simple theme. Powered by Blogger.